လာဘ်တွေကတိတ် ငွေကမဝင် စိတ်ညစ်နေလျှင် ငွေကြေးကံတွေ ပွင့်အောင် ယုံကြည်စွာနဲ့ လုပ်ကြည့်ပါ.. - Barnyar Barnyar
လာဘ်တွေကတိတ် ငွေကမဝင် စိတ်ညစ်နေလျှင် ငွေကြေးကံတွေ ပွင့်အောင် ယုံကြည်စွာနဲ့ လုပ်ကြည့်ပါ..
April 20, 2022 linn htet KNOWLEDGE 0
ဒီလိုပါ တချို့သောသူတွေမှာ ငွေကြေးတွေက အဆင်မပြေ ဘာလုပ်လုပ်ပေါ့ ။ လာဘ်တွေကတိတ် ငွေကမဝင် စိတ်တွေညစ် ရစရာရှိတာလေးတွေကလည်းမရ ဖြစ်နေသူတွေ ၊ ကြုံကြတဲ့သူတွေ ရှိတယ်ဗျ ။
တခါက ကျွန်တော်ဆီကို အမျိုးသမီးတဦး ရောက်လာတယ် ။ ကျွန်တော်လည်း ပြည်ရွှေဆံတော်က ဗောဓိညောင်းပင်အောက်မှာ အဓိဌာန်ဝင်တဲ့အချိန် ” ဘိုးတော်လေးကိုရှာနေတာ …… အိမ်ကိုသွားတော့ ရွှေဆံတော်မှာ အဓိဌာန်ဝင်နေတယ် …. ညောင်ပင်အောက်မှာ ဆိုလို့ လိုက်လာတာ ဘိုးတော်လေးရေ …. ” ဆိုပြီး အရေးတကြီး ……
” အေးအေး ဘာကိစ္စရှိလို့လည်း ပြောပါ ” ” ဒီလိုပါ ကျွန်မလာဘ်တွေ တိတ်ပြီး ဘာဆိုဘာမှ ငွေမဝင်ဘူးဖြစ်နေတယ် ရစရာရှိတာ မရဘူးဖြစ်နေတယ် ဘိုးတော်လေးရေ ……. ကူညီပေးပါအုန်း…. ”
” အော်လူရယ်လို့ ဖြစ်လာတော့ ပူမှုရယ်တဲ့ ဆယ်ကုဋေ ဆိုသလိုပါပဲဗျာ….. ကူညီပေးရမှာပေါ့…. အေးအေး ရော့ ဘောပင်နဲ့စာအုပ် သေချာလိုက်မှတ်ထားပါ….. လင်ဗန်းတချပ်ရှာလိုက် ကြေးလင်ပန်း စတီးလင်းပန်းရတယ် ကော်လင်ပန်းတော့ မရဘူးနော်……”
”ပြီးရင် ကွမ်း ၉ရွက်ရှာ လက်ဘက်ရှာ ဖယောင်းတိုင်အစိမ်း ဆီးမီးခွက်ရှာပါ…… ရပြီဆိုတာနဲ့ မနက်၉နာရီမှာ စပြီး လင်ပန်းပေါ်မှာ ကွမ်းရွက်၉ရွက် ကို အညှာဖြတ်ပြီး အဝိုင်းပုံစံ ၉ရွက်လုပ်ထား ပြီးတာနဲ့ ကွမ်းရွက်ပေါ်မှာ လက်ဘက် ၉ ပုံတင်လိုက်ဟေ့ ….. ”
” လက်ဘက်ကိုတော့ ဆီဆားမထည့်နဲ့နော် ….. ပြီးတာနဲ့ အလည်တည့်တည့်မှာ ဖယောင်းတိုင်းအစိမ်းထွန်း ဆီးမီးခွက်ပေါ်မှာ မီးထွန်းပူဇော်ကြည့်လိုက် ပါ ….. တလတိတိ လုပ်ကြည့် နော် ….. အရင်းဦးဆုံး ငါးပါးသီလခံ ပရိတ်ပဌာန်း ကြိုက်တာရွတ်ပြီးရင်တော့ ဒိဝါတပတိဂါထာတော်ကို ၁၈ခေါက်ပူဇော်ပါ…… ”
” မေတ္တာပို့အမျှဝေပြီး မိမိအခက်အခဲ အကြပ်အတည်း ငွေနံတွေ ပွင့်ပါစေဆိုပြီ ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ …. တလနဲ့မသိသာရင် နှစ်လတိတိတော့လုပ်ကြည့် သိသာထူးခြားရလိမ့်မယ်…… ခုလုပ်ခုရတော့ ဘယ်အရာမှ မရဘူးနော် ….. ”
” စိတ်ရှည်ရှည် ဇွဲသန်သန်လေးလုပ်ကြည့် သိသာလိမ့်မယ် သေချာလုပ်ကြည့် ကွမ်းရွက်နဲ့လက်ဘက်ကိုတော့ ၃ရက်တခါလောက် အသစ်ပြုလုပ်ပေးပါ …. ကွမ်းဆိုတာ တနင်္လာနံ ငွေနံ ၊လက်ဖက်ဆိုတာ နဝင်း ဓာတ်ဖယောင်းတိုင်အစိမ်း ဆိုတာ အေးချမ်းမှု အပွင့်လန်းဓာတ်ကို ယူပြီး လုပ်ခိုင်းတာနော် ….. ”
” လုပ်ကြည့်လိုက် ပြောတာလေး သေချာကူးယူသွားနော် ” ဆိုပြီး ” ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘိုးတော်လေး မှတ်ထားပါမယ့် ဒါကဘိုးတော်လေးအတွက် ” ရေသန့် အချိုရည် ရိက္ခာထောက်ငွေလေးကို စာအိတ်ထဲထည့်ပြီး အဓိဌာန်းဝင်တဲ့ နေရာမှာပဲ ထားခဲ့ပြီး ပြန်သွားလေရဲ့…..
အော် ……သတ္တဝါတခု ကံတခု ပါပဲ…… ကိုယ်ကူညီလိုက်တဲ့ အရာလေးတွေ အဆင်ပြေကြပါစေလို့ မေတ္တာပို့ရင်း ကိုယ်လုပ်လက်စ အဓိဌာန်းပုတီးပြန်စိတ်ပေါ့…. ။ နောက်သုံးလလောက်ကြာတော့ ပြန်လာလေရဲ့အိမ်ဓာတ်နန်းကို
” ဘိုးတော်လေးရေ အဆင်ပြေပါတယ် ဆိုင်လည်းရောင်းကောင်းလာတယ် ….. မရတော့ဘူး ဆုံးပါပြီဆိုတဲ့ ငွေတွေကလည်း ပြန်ရလို့ အဘကိုလာကန်တော့ရင်း ဘိုးတော်လေးကိုလည်း ကျွန်မလာကန်တာ့တာပါ ” ဆိုပြီး
ကဲထူးခြားမှုတွေကတော့ ဒါပါပဲ …….. ။ ယုံကြည်မှုနဲ့ လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ….. ။ ။
credit to ကျန်းမာချမ်းသာပြည်ဘိုးတော်လေးကိုအာကာ
လာဘျတှကေတိတျ ငှကေမဝငျ စိတျညဈနလြှေငျ ငှကွေေးကံတှေ ပှငျ့အောငျ ယုံကွညျစှာနဲ့ လုပျကွညျ့ပါ..
ဒီလိုပါ တခြို့သောသူတှမှော ငှကွေေးတှကေ အဆငျမပွေ ဘာလုပျလုပျပေါ့ ။ လာဘျတှကေတိတျ ငှကေမဝငျ စိတျတှညေဈ ရစရာရှိတာလေးတှကေလညျးမရ ဖွဈနသေူတှေ ၊ ကွုံကွတဲ့သူတှေ ရှိတယျဗြ ။
တခါက ကြှနျတျောဆီကို အမြိုးသမီးတဦး ရောကျလာတယျ ။ ကြှနျတျောလညျး ပွညျရှဆေံတျောက ဗောဓိညောငျးပငျအောကျမှာ အဓိဌာနျဝငျတဲ့အခြိနျ ” ဘိုးတျောလေးကိုရှာနတော …… အိမျကိုသှားတော့ ရှဆေံတျောမှာ အဓိဌာနျဝငျနတေယျ …. ညောငျပငျအောကျမှာ ဆိုလို့ လိုကျလာတာ ဘိုးတျောလေးရေ …. ” ဆိုပွီး အရေးတကွီး ……
” အေးအေး ဘာကိစ်စရှိလို့လညျး ပွောပါ ” ” ဒီလိုပါ ကြှနျမလာဘျတှေ တိတျပွီး ဘာဆိုဘာမှ ငှမေဝငျဘူးဖွဈနတေယျ ရစရာရှိတာ မရဘူးဖွဈနတေယျ ဘိုးတျောလေးရေ ……. ကူညီပေးပါအုနျး…. ”
” အျောလူရယျလို့ ဖွဈလာတော့ ပူမှုရယျတဲ့ ဆယျကုဋေ ဆိုသလိုပါပဲဗြာ….. ကူညီပေးရမှာပေါ့…. အေးအေး ရော့ ဘောပငျနဲ့စာအုပျ သခြောလိုကျမှတျထားပါ….. လငျဗနျးတခပျြရှာလိုကျ ကွေးလငျပနျး စတီးလငျးပနျးရတယျ ကျောလငျပနျးတော့ မရဘူးနျော……”
”ပွီးရငျ ကှမျး ၉ရှကျရှာ လကျဘကျရှာ ဖယောငျးတိုငျအစိမျး ဆီးမီးခှကျရှာပါ…… ရပွီဆိုတာနဲ့ မနကျ၉နာရီမှာ စပွီး လငျပနျးပျေါမှာ ကှမျးရှကျ၉ရှကျ ကို အညှာဖွတျပွီး အဝိုငျးပုံစံ ၉ရှကျလုပျထား ပွီးတာနဲ့ ကှမျးရှကျပျေါမှာ လကျဘကျ ၉ ပုံတငျလိုကျဟေ့ ….. ”
” လကျဘကျကိုတော့ ဆီဆားမထညျ့နဲ့နျော ….. ပွီးတာနဲ့ အလညျတညျ့တညျ့မှာ ဖယောငျးတိုငျးအစိမျးထှနျး ဆီးမီးခှကျပျေါမှာ မီးထှနျးပူဇျောကွညျ့လိုကျ ပါ ….. တလတိတိ လုပျကွညျ့ နျော ….. အရငျးဦးဆုံး ငါးပါးသီလခံ ပရိတျပဌာနျး ကွိုကျတာရှတျပွီးရငျတော့ ဒိဝါတပတိဂါထာတျောကို ၁၈ခေါကျပူဇျောပါ…… ”
” မတ်ေတာပို့အမြှဝပွေီး မိမိအခကျအခဲ အကွပျအတညျး ငှနေံတှေ ပှငျ့ပါစဆေိုပွီ ဆုတောငျးကွညျ့လိုကျပါ …. တလနဲ့မသိသာရငျ နှဈလတိတိတော့လုပျကွညျ့ သိသာထူးခွားရလိမျ့မယျ…… ခုလုပျခုရတော့ ဘယျအရာမှ မရဘူးနျော ….. ”
” စိတျရှညျရှညျ ဇှဲသနျသနျလေးလုပျကွညျ့ သိသာလိမျ့မယျ သခြောလုပျကွညျ့ ကှမျးရှကျနဲ့လကျဘကျကိုတော့ ၃ရကျတခါလောကျ အသဈပွုလုပျပေးပါ …. ကှမျးဆိုတာ တနင်ျလာနံ ငှနေံ ၊လကျဖကျဆိုတာ နဝငျး ဓာတျဖယောငျးတိုငျအစိမျး ဆိုတာ အေးခမျြးမှု အပှငျ့လနျးဓာတျကို ယူပွီး လုပျခိုငျးတာနျော ….. ”
” လုပျကွညျ့လိုကျ ပွောတာလေး သခြောကူးယူသှားနျော ” ဆိုပွီး ” ဟုတျကဲ့ပါ ဘိုးတျောလေး မှတျထားပါမယျ့ ဒါကဘိုးတျောလေးအတှကျ ” ရသေနျ့ အခြိုရညျ ရိက်ခာထောကျငှလေေးကို စာအိတျထဲထညျ့ပွီး အဓိဌာနျးဝငျတဲ့ နရောမှာပဲ ထားခဲ့ပွီး ပွနျသှားလရေဲ့…..
အျော ……သတ်တဝါတခု ကံတခု ပါပဲ…… ကိုယျကူညီလိုကျတဲ့ အရာလေးတှေ အဆငျပွကွေပါစလေို့ မတ်ေတာပို့ရငျး ကိုယျလုပျလကျစ အဓိဌာနျးပုတီးပွနျစိတျပေါ့…. ။ နောကျသုံးလလောကျကွာတော့ ပွနျလာလရေဲ့အိမျဓာတျနနျးကို
” ဘိုးတျောလေးရေ အဆငျပွပေါတယျ ဆိုငျလညျးရောငျးကောငျးလာတယျ ….. မရတော့ဘူး ဆုံးပါပွီဆိုတဲ့ ငှတှေကေလညျး ပွနျရလို့ အဘကိုလာကနျတော့ရငျး ဘိုးတျောလေးကိုလညျး ကြှနျမလာကနျတာ့တာပါ ” ဆိုပွီး
ကဲထူးခွားမှုတှကေတော့ ဒါပါပဲ …….. ။ ယုံကွညျမှုနဲ့ လိုကျလုပျကွညျ့ပါ….. ။ ။
credit to ကနျြးမာခမျြးသာပွညျဘိုးတျောလေးကိုအာကာ
အမျိုးသမီးတွေ ရေကူးကန်သွားရင်သတိထား ကိုယ်ဝန်ရတတ်တယ်တဲ့ လက်မခံနိုင်တဲ့ သူတွေကတော့ ငြင်းနေကြလေရဲ့